आसन्न महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाका लागि खुसीको खबर ! - Media Dabali
सोमवार, आषाढ ७ २०७८
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आसन्न महाधिवेशनको आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला खुसीको खबर आएको छ ।
१३औं महाधिवेशनभन्दा आसन्न १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः सभापति बन्न सहज हुने सुझाव केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएका छन् । देउवाले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सभापतिमा पुनः लड्नेबारे परामर्श गरिरहेका छन् ।
सोमबारको छलफलमा सहभागी सभापति देउवा पक्षीय नेता तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरले भने, ‘१३औं महाधिवेशनभन्दा सभापतिमा लड्न अहिले कम्फर्टेबल छ । छलफलमा सहभागीको सबैको भनाइ समेत यस्तै छ ।’ पहिलाभन्दा सजिलो भएको सुझाव पाएपछि देउवा खुसी हुँदै हौसिएका स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी नेता बलायरले भने, ‘केही मेहनत गर्नुपर्छ, सभापतिमा देउवाले नै जित्नुहुन्छ ।’ सभापतिमा दोहोरिनुपर्ने समयको आवश्यकता समेत रहेको सुझाव देउवालाई सहभागीले दिएका छन् ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रभावशाली नेताहरूसँग देउवाले सोमबार छलफल गरेका छन् । बिहान ९ बजेदेखि भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका उनले बताए ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सभापति पदका आकांक्षीले दौडधुप सुरु गरेका छन् । औपचारिक रूपमा सभापति पदमा लड्ने जानकारी दिँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन् भने देउवालाई टक्कर दिन अगाडि सरेका छन्, उपसभापति बिमलेन्द्र निधि ।
देउवासँग प्रारम्भिक छलफल गर्दा सन्तोषजनक जवाफ नपाएका उपसभापति निधिले कांग्रेसका शीर्ष नेताभित्रै पर्ने प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालासँग परामर्श गरेका छन् । देउवाले सभापतिमा लड्न जो पनि स्वतन्त्र रहेको र आफूले नछाड्ने स्पष्ट जवाफ दिएपछि निधि कोइराला पक्षसँग छलफलमा लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतात्रय बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रहरू क्रमशः डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधिबीच सोमबार आपसी परामर्श भएको छ । तीनै जना सभापति पदका आकांक्षी समेत हुन् ।
उपसभापति निधि निवास बानेश्वरमा भएको छलफलमा आगामी महाधिवेशनबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा निधिले आफूलाई सभापति पदमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा नेताहरूले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । निधि देउवा पक्षका नेता मानिन्छन् भने कोइराला र सिंह कोइराला–पौडेल पक्षका नेता हुन् ।
गत शुक्रबारको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने निधो गरेपछि सभापति पदका आकांक्षी सतहमा देखिन थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दोस्रो कार्यकाल दोहोरिने गरी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेर आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला निधि समेत सक्रिय बनेका छन् ।
सभापति देउवा पक्षकै उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले समेत सभापतिमा उम्मेदवारी दिने इच्छा देखाएका बेला दुबै नेताबीच देउवानिवास बुढानिलकण्ठमा गत शनिबार छलफल भएको थियो । तर छलफलमा दुबै नेताबीच कडा टक्कर हुने देखिएको थियो ।
सभापति देउवासँगको भेटमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आगामी महाधिवेशनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपनि देउवाले आफैं लड्ने दाबी गरे ।
सभापति देउवाले निधिलाई आग्रह गर्दै भने, ‘सभापतिमा फेरि उठ्छु । २ नम्बर प्रदेशबाट धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नका लागि तपाईंले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो ।’ जवाफमा निधिले भने, ‘तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यसपालि संस्थापन पक्षबाट म उम्मेदवार हुन्छु, मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ यसरी दुबै नेताबीच बुढानिलकण्ठमा कडा टक्कर भएको थियो ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सभापतिमा दोहोरिन खोजेका देउवाले ७ वटै प्रदेशका आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देउवा, पौडेल, कोइराला कुनै पनि पक्षमा सर्वसम्मत उम्मेदवार देखिएका छैनन् । कांग्रेस नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वमा सबैको चासो रहने गरेको छ ।